OZI gbasara mkpokọta na ojiji
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd akwanyere nzuzo gị na secures gị online nchekwa kpọrọ ihe. Na iji nye gị na nke kacha mma ngwaahịa, oru oma ahịa ọrụ, ma na ngwa ngwa mmelite, anyị idekọ a dịgasị iche iche nke ozi site na gị nleta anyị na saịtị. Iji mma kpuchido nzuzo gị, anyị ga-amasị na-akọwa anyị online ozi omume na ụzọ ozi gị na-anakọtara na-eji.
Daalụ maka ịnweta na website nke (saịtị adreesị: https://www.bescatray.com/ ). Anyị na-akwanyere nzuzo gị na chọrọ ichebe onwe gị ozi. Iji mụtakwuo, biko na-agụ anyị Nzuzo Rịba
Nke a Nzuzo Rịba ama na-akọwa otú anyị na-anakọta, iji, na (n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ) igosipụta ozi nkeonwe gị. Nke a Nzuzo Rịba ama na-akọwakwa ndị anyị emeela ka e meere gị ozi. N'ikpeazụ, a Nzuzo Rịba ama na-akọwa nhọrọ gị gbasara nnakọta, ojiji, na ngosi nke ozi nkeonwe gị. Site na ịga na anyị na saịtị, ị na-anabata omume kọwara na Ọkwa a.
Nke a Nzuzo Rịba ama na-emetụta nanị na nke a Site. Nke a na iwu nzuzo na ọ bụchaghị emetụta anyị offline collection nke ozi gbasara gị. Biko hụ n'okpuru maka nkọwa. Anyị abụghị ndị na-ahụ maka ọdịnaya ma ọ bụ omume nzuzo ọ bụla anaghị https://www.bescatray.com/ website nke a Site njikọ ma ọ bụ na njikọ anyị na saịtị.
1. Ozi Collection. Anyị na-anakọta ozi site na ị na ọtụtụ ụzọ dị iche iche na nke a Site. Otu ihe mgbaru ọsọ na-achịkọta ozi site ị bụ inye otu oru oma, nzube, ma na ahaziri ahụmahụ. Ka ihe atụ, anyị nwere ike iji ozi nkeonwe gị na:
Nyere ka a Site mfe n'ihi na ị na-eji site na-enwe na tinye ozi ọzọ.
Enyere gị aka ngwa ngwa ahụ ozi, na ngwaahịa, na ọrụ.
Nyere anyị ike ọdịnaya na a na saịtị na bụ ihe kasị mkpa gị.
Nche gị ihe ọmụma ọhụrụ, na ngwaahịa, na ọrụ anyị na-enye.
A, unu adịghị mkpa na-enye gị ozi na gaa na nke a website. Otú ọ dị, iji melite àgwà nke ọrụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịchọ ka-enye onwe onye ozi aka Company ka mma-aghọta gị mkpa ejere gị ozi, n'otu oge ahụ, na Company na-isiokwu ime ihe iji nyochaa ozi nkeonwe ị enye ezigbo ya. Ọ bụrụ na ị na-enye onye ọzọ banyere ndị ọzọ, mgbe ahụ, i mere ka a iwu ihu ọma nke ndị ọzọ. The ụlọ ọrụ nkwa, ma gị onwe ya chọrọ, ụlọ ọrụ na-agaghị eso gị ozi na Company na mmekọ ya maka ihe ọ bụla ọzọ.
2. Ozi Iji na ngosi.
(a) Esịtidem Iji. Anyị na-eji ozi nkeonwe gị hazie na gị iji na-enye gị ahịa ọrụ. Anyị nwere ike internally iji onwe gị ozi ka mma anyị Site afọ ma okirikiri nhọrọ ukwuu, ka mma anyị outreach na nke anyị ahịa mgbalị (gụnyere ahịa anyị ọrụ na ngwaahịa gị), na-ekpebi general n'ọma ahịa ihe ọmụma banyere ọbịa a Site.
(b) Communications na Ị: Anyị ga-eji gị onwe onye ozi ahụ iji kpọtụrụ gị banyere anyị na saịtị, na gị iwu na deliveries. Ọzọkwa, anyị nwere ike izitere gị a nkwenye email mgbe ị denyere aha na anyị.
(c) Mpụga Iji. Anyị chọrọ iji nye gị magburu onwe ọrụ na-enye gị oké nhọrọ - na anyị bụ isi na-ere ahịa na ngwá ahịa, ọ bụghị ozi. Anyị na-adịghị ere, mgbazinye, ahia, ikike, ma ọ bụ n'ụzọ igosipụta gị kpọmkwem ozi ma ọ bụ ego ozi na onye ọ bụla.
Nke a na saịtị na-agụnye anụ, electronic, na nhazi usoro ichebe confidentiality nke ozi gbasara gị, gụnyere Secure Sockets Layer ( "SSL") n'ihi na niile ego azụmahịa site na nke a Site. Anyị na-eji SSL izo ya ezo na-echebe onwe gị ozi online, na anyị na-iri ọtụtụ ihe iji chebe onwe gị ozi anyị ụlọ ọrụ. Access ka onwe gị ozi bụ nanị. Naanị ọrụ ndị chọrọ ohere onwe gị ozi na-arụ a kpọmkwem ọrụ na-nyere ohere ozi nkeonwe gị. N'ikpeazụ, anyị na-adabere na-atọ ndị ọzọ na-enye ọrụ maka anụ ahụ nche nke ụfọdụ n'ime anyị na kọmputa ngwaike. Anyị kweere na ha nche na usoro ndị ezigbo. Ka ihe atụ, mgbe ị gara na anyị Site, ị nweta sava na-nọ na-na a ala ahụ gburugburu ebe obibi, n'azụ a kpọchiri onu na otu kọmputa firewall.
Mgbe anyị na-eji ụlọ ọrụ ọkọlọtọ anya iji chebe onwe gị ozi, anyị nwere ike ekwe nkwa nchebe zuru ezu. 100% nchebe zuru ezu na-eme ugbu adị n'ebe ọ bụla online ma ọ bụ offline.